Rajoelina-MAPAR : Mitady fotodrafitrasa hotokanana -
AccueilRaharaham-pirenenaRajoelina-MAPAR : Mitady fotodrafitrasa hotokanana
28/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tokony ho notokanana omaly ny kianjan’ny Fahaleovantena, izay namboarina tamin’ny alalan’ny volan’ny PLD (comité local de développement), sy ny lapan’ny vahoaka, izay ny minisiteran’ny Vola sy ny Teti-bola tanteraka no miantoka ny fanamboarana ireto fotodrafitrasa tsara tarehy ao Ifanadiana ireto. Tsy tanteraka anefa izany, satria nosakanan’ny solombavambahoaka, Lova Razafindrafito na Paupile, ny lehiben’ny distrika, ary ny minisitry ny Atitany.
Tokony ho nanomboka omaly tamin’ny roa ora tolakandro ny lanonana fanokanana ireto fotodrafitrasa ireto, saingy voatery nangorona ny fanamafisam-peo (sono) ny tompony, noho ny tahotra sy ny fampihorohoroana nataona andian’olona nilanja « mégaphone », izay nisakana ny fanatanterahana ny fety. Nambaran’ny lehiben’ny distrika fa ny minisitry ny Atitany no nanome baiko hampiato ny fitokanana. Niakatra tany ambony tany ny raharaha, ka tonga hatrany amin’ny SEG. Nampanantena ity farany, araka ny vaovao azo fa handefa miaramila avy ao Ranomafana, hiambina ny toerana hanatanterahana ny lanonana. Niova tampoka tao anatin’ny segondra anefa ny raharaha, tsy hiambina ilay toerana no anton-dian’ireo miaramila fa hanala ny olona rehetra mihitsy, izany hoe, foana tanteraka ilay lanonam-pitokanana.
Mirehareha fatratra mantsy ny solombavambahoaka Lova Razafindrafito, fa ny tenany no vy nahitana ireto fotodrafitrasa roa ireto, kanefa dia ny volan’ny PLD sy ny minisiteran’ny Vola izao no nanamboarana azy ireo. Lasa MAPAR moa ity depiote ity rehefa niala tsy ho mpiara-dia tamin’ny HVM intsony. Mazava araka izany ny tanjona tamin’ny fanakanana ity fitokanana ity. Mitady fotodrafitrasa hotokanana mafy ny MAPAR sy Andry Rajoelina, entina hamitaham-bahoaka fa izy ireo no nahavita teto amin’ny firenena. Efa very eo am-pelatanan’ny HVM indray izany aloha Ifanadiana. Na ny lehiben’ny distrika, ny mpitandro filaminana dia efa manaiky izay tian’ity solombavambahoaka Paupile atao, eo rahateo koa ny fiandanian’ny minisitry ny Atitany. Izao sahady izany dia efa mafana ny raharaha, tahaka ny ahoana rehefa tena anaty propagandy? Marihina moa fa omaly tamin’ny 9 maraina, dia efa tonga tany an-toerana ny hainoamanjerin’ny mpanohitra.
Ny fananganana ireo hopitaly manara-penitra sy ny “coliseum” ve no tena laharam-pahamehana ho an’ny firenena ka nandaniana ny vola mitentina 1 800 miliara azo avy tamin’ny famarotana ny vy any Soalala? Raha ny vola lany ...Tohiny